“Haddii la leeyahay Xukuumadda iyo Goluhu may murmin Ninka muranka u baahani ha sameeyo….” Gud: C/Raxmaan-Cirro | Berberanews.com
Home WARARKA “Haddii la leeyahay Xukuumadda iyo Goluhu may murmin Ninka muranka u...
“Haddii la leeyahay Xukuumadda iyo Goluhu may murmin Ninka muranka u baahani ha sameeyo….” Gud: C/Raxmaan-Cirro
Hargeysa-(Berberanews)- Guddoomiyaha Golaha Wakiillada Somaliland Md. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirro), ayaa ka hadlay dhalliilo dhawaanahan aad loo hadal-hayo oo la xidhiidha in Xukuumadda talada haysa iyo Golaha Wakiilladu isku milmeen, isla markaana aanay mudanayaashu sidii loo baahnaa u shaqayn.
Guddoomiye Cirro waxa uu ku dooday inaanay taa waxba ka jirin, isla markaana goluhu sidii ugu habboonayd waajibaadkiisa shaqo ee sharcigu siiyey u guto. Cabdiraxmaan Cirro waxa kale oo uu sheegay in Ururrada hadhay xaq u leeyihiin in dacwaddooda la dhagaysto, fursadna loo siiyo inay dacwoodaan, hase ahaatee, waxa uu Ururrada u soo jeediyey inay jidka ugu habboon tabashadooda u maraan.
Guddoomiyaha Golaha Wakiillada Md. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirro) iyo Guddoomiye Ku-xigeenka labaad ee golahaas Md. Cali Aw Yuusuf, oo muddo toddobaad ah Safar shaqo ku joogay dalka Namibia oo ay marti-qaad rasmi ah ka heleen dhiggooda waddankaas, ayaa maanta dalka ku soo laabtay, waxaana garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa ku soo dhaweeyey Guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha Wakiillada Md. Baashe Maxamed Faarax iyo Xildhibaanno ka tirsan golahaas oo uu hoggaaminayey iyo hawl-wadeennada golaha wakiillada. Waxaanu Guddoomiye Cirro oo Weriyeyaasha kula hadlay qolka nasashada garoonka diyaaradaha Hargeysa, sheegyay inay Madaxda dalka Namibia kala hadleen arrimo ku saabsan gooni-isu-taagga Somaliland, taageerada ay u fidin karto iyo xidhiidhka labada dal.
“Aniga iyo Guddoomiye ku-xigeenka 2-aad ee Golaha Wakiilladu waxaannu marti-qaad ka helnay Barlamaanka dalka Namibia oo si wacan ayey noo soo dhaweyeen Shir-guddoonka Barlamaanka Namibia. Waxa kale oo aannu la kulannay Raysal Wasaaraha dalkaas Nahasa Angula oo aannu muddo dheer kala hadlaynay arrimaha Somaliland iyo gaar ahaan wixii ay Somaliland ku tari karaan. Hadday tahay tabobbarka Ciidammada Booliska iyo Deeqaha Waxbarashada inay Ardayda siiyaan deeq waxbaraasho.” Sidaa ayuu yidhi Guddoomiyaha Golaha Wakiillada Somaliland Md. Cirro.
“Runtii soo dhawayn wanaagsan ayaannu kala kulannay, hawshii aannu u tagnayna si wanaagsan ayey noogu socotay. Waxaannu rejeenaynaa inaannu marti-qaadno oo iyaguna ay dhawaan yimaddaan Somaliland ayaannu rejeenaynaa. Safarkaasi waxa uu ahaa Safar albaabada ufuray xidhiidhka labada wadan ee Somaliland iyo Namibia iyo labada Gollaba. Waxaanu rajeenaynaa isu-socka labada wadan inuu halkaas ka soo socda haddii uu illahay ka dhigo.” Sidaa ayuu yidhi Guddoomiyaha Golaha Wakiillada Somaliland Md. Cabdiraxmaan Cirro.
Guddoomiyaha Golaha Wakiilladu waxa uu sheegay inay masuliyiinta dalka Namibia si wacan ugala hadleen qadiyadda Somaliland, kana codsadeen masuliyiintaas inay tageeraan gooni-isu-taagga Somaliland, Md. Cirro oo arrintaa ka hadlayaana waxa uu yidhi; “Somaliland qaddiyaddeeda Masuuliyiintii aannu la kulannay si wanaagsan ayaannu ugala hadalnay oo waxaannu ka codsannay inay tageeraan qaddiyadda iyo gooni-isu-taagga Somaliland. Waxaannu rejeenaynaa inay tageeri doonaan haddii uu Illaahay ka dhigo.”
Geesta kale, Guddoomiyaha Wakiillada Somaliland ahna Guddoomiyaha Urur-siyaasadeedka WADANI oo ka tirsan lixda Urur ee u soo gudbay inay ka qaybgalaan doorashada dawladaha hoose ee dalka, waxa uu ka hadlay Ururrada ku hadhay marxaladdii labaad ee qiimaynta Guddiga diiwaangelintu samaysay. “Horta maalintii lagu dhawaaqay maalintii ku xigtay ayaan dalka ka baxay, warar iyo maclumaad badan kamaan helin ee Imtaxaankaasi waxa uu ahaa Imtaxaan ay Ururradu wada galeen oo way u sinnaayeen, mid soo baxaya iyo mid hadhaya illaa lagu dhawaaqay runtii cid ogayd may jirin, oo qofku haddii uu cadaalad-darro tirsanayo xaq buu u leeyahay inuu arrintaas ka dacwoodo oo uu ka dacwoodo meelaha ku habboon.”
“Markaas Ururradaas dhacay waannu ka xunay inay dhaceen, laakiin waxa uu ahaa Imtaxaan la galayo, Imtaxaankana cidina way dhacdaa cidina way baastaa. Markaa, waxaannu rejeenaynaa in Cadaaladda la sugo, waxaana wacan in iyagana la siiyo fursad ay ku dacwoodaan.” ayuu hadalkiisa sii raaciyey Guddoomiye Cabdiraxmaan-Cirro.
Guddoomiyaha Golaha wakiillada Somaliland waxa uu sheegay in shaqsiyan Xukuumadda aanay waxba ka dhaxayn, isla markaana Barlamaanku uu ka madax-bannaan yahay Xukuumadda oo Golaha uu waajibaadkiisa uu ka soo bixi doonaan. “Anigu Urur aan leeyahay ma jiro ee Waddani waxa leh Somaliland, waxaanu ka mid yahay Ururrada. Wax gaar ah oo aniga shaqsiyan Xukuumadda naga dhaxeeyaa ma jiraan ee waajibaad ayey kala leeyihiin Golaha iyo Xukuumaddu oo waxaan rumays nahay in Goluhu uu waajibaadkiisa ka soo bixi doono markasta oo loo baahdo.” Sidaaa ayuu yidhi Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirro).
Guddoomiyaha Golaha Wakiillada Somaliland waxa uu ku dooday in Golaha wakiilladu si fiican u guto waajibaadkiisa shaqo, waxaanu yidhi; “Wajibaadkiisa waxa ka mida inuu Xukuumadda hubiyo shaqada ay qabanayso oo Goluhu waxa uu u taagan yahay wax-qabad. Hadday jirto oo la leeyahay Xukuumaddii faraha ayaa laga qaaday anigu waxaan leeyahay ma jirto oo waxaan qabaa inuu waajibaadkiisu yahay inuu Xeerar badan sameeyo, waajibkaana wuu ka soo baxay. Haddii la leeyahay Xukuumadda iyo Goluhu may murmin dee Somaliland hadday muran u baahan tahay Ninka muranka u baahani muranka ha sameeyo.”
Waxaanu ku baaqay Cabdiraxmaan Cirro in guud ahaan dadka reer Somaliland nabadgelyadooda iyo degganaanshahooda si wada-jir ah u ilaashadaan, midnimo iyo isku duubnina sameeyaan, si ay himiladooda ugu guulaystaan.
Previous articleTACSI: Taliyaha Ciidammada Madaxtooyadda oo Tacsi u dirayaa MARXUUM. JAAMAC XUSEEN CAWAALE (BIREEYE)
Next articleBadhasaabka Gobolka Saaxil oo ka qaybgalay Barnaamij shirkadaha Dahabshiil Group ku maalgelinayaan Maxtabadda Jaamacadda Berbera.Video